के जितु नेपाल ‘छक्का पन्जा’ टिमबाट बाहिरिएका हुन् ? – Dainik Sangalo
के जितु नेपाल ‘छक्का पन्जा’ टिमबाट बाहिरिएका हुन् ?
November 2, 2020 287
काठमाडौँ,१७ कार्तिक – हाँस्य कलाकार जितु नेपालले संचालन गर्दै आएको रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट निर्देशक दीपाश्री निरौला बाहिरिइन् । दीपाश्रीले नायक राजेश हमालको बिषयमा दिएको एक अभिव्यक्ति कै कारण उनी शोबाट बाहिरिन् बाध्य भइन् । उनी शोबाट बाहिरिएपछि नायिका करिश्मा मानन्धर अध्यक्षको रुपमा शोमा भित्रिएकी छिन् ।
दीपाश्री ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट बाहिरिएसँगै चलचित्र बजारमा ‘छक्का पन्जा’ टिमबाट जितु नेपाल पनि बाहिरिएको चर्चा सुरु भएको छ । अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट दीपाश्री बाहिरिनुको कारण संचालक जितु नेपालले विज्ञापनदाता र निर्माण कम्पनीलाई देखाएका थिए । जितुले केही समय अगाडि एक अनलाइनसँगको कुराकानीमा विवादपछि विज्ञापनदाताले समस्या उत्पन्न भएको बताएपछि निर्माण कम्पनीले यो बिषयमा कुरा गरेको र दिपाजीले पनि सहर्ष स्विकार गरेको बताका थिए ।
तर, जितुले विज्ञापनदाता र निर्माण कम्पनीको असन्तुष्टीका कारण दीपाश्री शोबाट बाहिरिएको बताएपनि ‘छक्का पन्जा’ टिमलाई भने उनकै कारण दीपाश्री बाहिरिएको भन्ने परेको छ । श्रोतका अनुसार –‘विज्ञापनदाता र निर्माण कम्पनीको भन्दा पनि जितु नै राजेश हमाल विवादपछि दीपाश्रीलाई राखेर शोमाथि जोखिम मोल्न नचाहेको भन्ने वुझाई ‘छक्का पन्जा’ टिमको छ ।
यो बिषयमा जितुले भने–‘मैले पनि टिम टुटेको भन्ने खबर समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएँ । तर, हाम्रो टिम टुटेको छैन । मेरो सबैसँग सम्बन्ध राम्रो छ । एउटा कुरा के हो भने, अहिले हाम्रो कम्यूनिकेशन टुटेको भने छ । दीपाश्री दिदीसँग मेरो च्याटमा कुरा हुन्छ । एक दुइवटा चलचित्रमा जितु नेपाल भएन भने पनि सम्बन्ध टुटेको भन्न मिल्दैन । हरेक चलचित्रमा म हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’
के दीपकराज र निश्चलबीच टिमअप हुँदैछ ?
काठमाण्डौ, – कोरोना भा इरसका कारण आठ महिनादेखि फिल्म क्षेत्र सुनसान छ । सिनेमा हलको गेटमा ताल्चा झुण्डिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका फिल्म कम्प्यूटरको हार्ड डिस्कमा थन्किएका छन् । निर्माणको तयारीमा रहेका फिल्म सरकारको अनुमति कुरेर बसेका छन् । सरकारले फिल्म क्षेत्रमा लगाएको प्र तिबन्ध फुकुवा नगर्दा फिल्म क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अन्योलको स्थिति छ ।
सरकारले फिल्म निर्माण र प्रदर्शन खुल्ला गरेपछि फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूला मेकरबीच सहकार्य हुनुपर्ने र ठूला स्टारले शेयरमा काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा फिल्म क्षेत्रका बलशाली मेकरको रुपमा कहलिएका दीपकराज गिरी र ‘लु ट’ पछि नेपाली फिल्ममा कथा भन्ने शैली नै परिवर्तन गरेका निश्चल बस्नेतबीच नयाँ फिल्ममा सहकार्यको चर्चा चलेको छ ।
काठमाडौंस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा दीपकराज र निश्चलसँगै निर्देशक दीपाश्री निरौला र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काबीच विशेष भेटघाट भएको थियो । त्यहाँ उनीहरुले एकसाथ डिनर पनि गरेका थिए । स्वस्तिमा र दीपाश्रीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा गोकर्ण रिसोर्ट घुमेका र कुराकानी गर्दै डिनर गरेका तस्विर तथा भिडियो क्लिप्सहरु शेयर गरेका छन् ।
दीपकराज र निश्चलको यो भेटघाटलाई फिल्मकर्मीहरुले विशेष रुपमा लिएका छन् । नयाँ प्रोजेक्टमा सहकार्यका लागि उनीहरुबीच भेटघाट भएको हुनसक्ने कतिपयको आँकलन छ । यद्यपि, उनीहरुबीच कुन शिलशिलामा भेटघाट भएको थियो, त्यो भने खुलेको छैन । यो अवस्थामा यी दुई ठूला मेकरबीच टिमअप हुन सकेको खण्डमा नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ ।
Prevबिहीबारदेखि फेरि एक महिना लामो लकडाउन हुने प्रधानमन्त्रीको घोषणा !